अहिले सम्म प्रयोग नगरिएको यो कानुनी अभ्यासको प्रयोग गरेमा के होला ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अहिले सम्म प्रयोग नगरिएको यो कानुनी अभ्यासको प्रयोग गरेमा के होला ?
समातिएलान् त त्यसो गर्ने श्रीमान् ?
संविधानमा प्रष्ट प्रावधान भएर पनि कार्यान्वयनमा लैजान हच्किएका ठूला दलहरु लोकमान प्रकरण आउँदा त एउटा अभ्यासमा उत्रिए । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हकमा महाअभियोग दर्ता गर्दाचाहिँ फेल खाएका छन् । मनको आवेग शान्त गर्ने नै सुर हो भने अब अर्को एउटा कानुनी प्रावधान छ । त्यसमा जाने कि नजाने भन्ने अन्यौलतापन कायमै छ ।
संसदीय सर्वोच्चताको नाममा दुई सय ५९ जनाले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावउपर एकजना न्यायाधीशले हमला गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदारसहित सभामुख पनि आक्रोशित छन् । तर, यो आक्रोशमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुबै शान्त हुने हुन् या यसले उग्र रुप लिन्छ, हेर्न बाँकी छ । प्रयोग नगरिएको एउटा कानुनी अभ्यास प्रयोगमा ल्याउने नै हो भने न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको हातमा हत्कडी लाग्न सक्छ । संसदको विशेषाधिकार हननमा कुनै एउटा सांसदले मात्र लिखित उजुरी हाल्यो भने संविधानको धारा १०३ को उपधारा २, ६ र ८ अनुसार त्यस्तो कामलाई संसदको अवहेलना मान्न सकिन्छ । र, अवहेलनाकर्तालाई समातेर थुन्ने प्रावधान छ । संविधानको उक्त धारामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘संघीय संसद्लाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ, यस्तो कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ । यससम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिने र विशेषाधिकार हननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने व्यवस्थासमेत छ । ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ’, उपधारा ८ मा भनिएको छ ।
यो भनेको महाभियोगभन्दा डरलाग्दो सजायँ हो । यस्तो अभियोग लाग्नासाथ स्वतः पद जाने कुरा स्वयंसिद्ध नै छ । कुनै एक सांसदले त्यस्तो सूचना दर्ज गर्नासाथ ६१ सदस्यीय विशेषाधिकार हनन समिति बन्छ । समितिले आवश्यक ठहर गरेको खण्डमा व्यवस्थापिका संसद नियमावलीः २०७३ दफा २११ को ३ अनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिलाई समाह्वान वा गिरफ्तार गरी छानबिनको काम शुरु हुन्छ । त्यसपछि साक्षी–प्रमाण जुटाउन, बयान गराउन थालिन्छ । दफा ४ अनुसार पहिले थुनामा राखेर कारवाही हुन्छ, फैसला पछि हुन्छ । अर्थात्, ज्यानसम्बन्धी महलकै मुद्दाको शैलीमा न्यायाधीशमाथि कारवाही लाग्नसक्छ । के चोलेन्द्र समशेरको हकमा यस्तै हुने स्थिति हो त ? किनभने, महाअभियोगको सूचना संसदमा दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भनिएकै छैन । त्यसमा कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिन् भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर, चोलेन्द्र समशेरको आदेशमा ‘हस्तक्षेप’बारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन । सतिले सरापेको देश भनिएको छ । मन दुख्यो भनिएको छ । तर, कहीँ पनि संविधानको यो धाराअनुसार निलम्बन फुकुवा गरेँ भन्ने आधार उल्लेख गरिएको छैन । न्यायाधीशले मन दुखेको आधारमा फैसला गर्ने कि कानुनका बुँदाहरुमा टेकेर आदेश गर्ने हो ? जस्तो कि, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका जेपी गुप्तालगायत पूर्वमन्त्रीहरुलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा चोलेन्द्र समशेरको बारेमा सुशीला कार्कीले टिप्पणी लेखेकी छन्, ‘यसले गलत गरेको छ, कारवाही हुनुपर्छ ।’ त्यसकारण रामकुमारप्रसाद साहकै पालादेखि सुशीला चोलेन्द्र समशेरसँग एउटै बेञ्चमा कहिल्यै बसिनन् । आफूले पनि कार्यकालभरि उनीसँग आफ्नो बेञ्च तोकिनन् । उनै चोलेन्द्र तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् । अहिले उनैले सुशीलालाई उन्मुक्ति दिएका छन् । र, लगत्तै सुशीला सर्वोच्चमा हाजिर पनि भएकी छन् ।
‘हामीले न्यायाधीश बनाएको मान्छे, हाम्रो इच्छाविपरित जाने ?’ भन्ने कांग्रेस र माओवादीको भनाइ छ । देव गुरुङ कानुनमन्त्री, मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश, अनुपराज शर्मा, बासुदेव ढुंगाना, मोतिकाजी स्थापित न्यायपरिषद्को सदस्य हुँदा ०६५ सालमा १ नं. मै सुशीलालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै थिए । सुशीलालाई त्यसरी फेभर नगरेको भए १ नं.मा प्रकाश वस्ती हुन्थे । भरतराज उप्रेती, तर्कराज भट्ट र वैद्यनाथ उपाध्याय पनि त्यही लटका न्यायाधीश हुन् । त्यसमध्ये प्रकाश, भरत र तर्कराजलाई अस्थायीबाटै बिदा गरियो । बैद्यनाथको पालो मिचेर मरेतुल्य बनाइयो । यो लटमा सुशीला मात्र स्थायी भइन् । यदि त्यसो नगरिएको भए नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एकजना मगरका छोरा प्रधानन्यायाधीश हुँदै थिए, तपबहादुर मगर । विराटनगरमा वकालत गर्दागर्दै देउवाको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) कोटाबाट ०६३ को अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्ने कमिटीमा सुशीला परेकी हुन् । प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको कोटाबाट त्यसरी लगिएका तीन जना अहिले तीनतिर भएका छन् । अहिले महाअभियोग प्रस्ताव लगाउने प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा त्यसबेला देउवाकै तर्फबाट मस्यौदा समितिमा पनि थिए । अन्तरिम संविधान मस्यौदाताका सुशीला माओवादी लाइनकै समर्थनमा थिइन् । देउवाकै अर्का विश्वासिला महादेव यादव नागरिकता र संघीयताको कुरामा अड्काउँथे । मीनबहादुर विश्वकर्मालाई दलितबाहेकका मुद्दासँग मतलव थिएन । अर्को पनि डर रहेछ कांग्रेसलाई, जेठ ८ गते सुशीलाले गोविन्दराज जोशीलाई जेल हाल्ने, बैशाखको १९ गते नै नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउन आदेश दिने । र, शेरबहादुरमाथि मानहानी मुद्दा ठहर गराउने अर्को खतरा पनि कांग्रेसले महसुस गरेकै थियो ।आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट